တောရက်စ် | | ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
အပူချိန်မြင့်မားသောကြောင့်နွေရာသီတွင်အစာကြေခြင်းပြproblemsနာများသည်အလွန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကအစားအစာကိုကောင်းစွာအစာမကြေနိုင်ဘူးနှင့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အအေးနှင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာများစားသုံးမှုကိုထပ်ဖြည့်ပါကအစာခြေညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အခြားအစာခြေပြproblemsနာများဖြစ်ပွားခြင်းအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်မှဆင်းသက်လာသည့်မကြာခဏပြproblemsနာတစ်ခုမှာချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အပူချိန်ကချွေးထွက်စေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ညံ့ဖျင်းသောဓါတ်ကိုပြန်လည်၏အကျိုးဆက်။ အရည်မရှိခြင်းသည်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာရေဓာတ်ပြည့်ဝမှုနှင့်မမှန်ကန်သောအာဟာရဓာတ်များဖြစ်သည် နွေရာသီတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအစာခြေပြproblemsနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများမဟုတ်တစ်ခုတည်းသောပေမယ့်။
1 နွေရာသီမှာအစာခြေပြproblemsနာများ, သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်
ပူပြင်းသည့်လများအတွင်းအစားအစာသည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာယိုယွင်းပျက်စီးနိုင်ပြီးနွေရာသီတွင်သင်စားသောအရာအားလုံးကိုအထူးဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ အစာမကောင်းသောအစာသည်ပြင်းထန်သောအစာခြေခြင်းပြcauseနာများဖြစ်စေနိုင်သည်, ကဲ့သို့ အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း.
၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်၊ သင်သည်အိမ်နှင့်အစားအစာများကိုမည်ကဲ့သို့ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သည်ကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည် လမ်းပေါ်တွင်စားသောအရာများကိုအထူးဂရုပြုပါ။ နွေရာသီတွင်အစာကြေခြင်းပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုကောင်းစွာသတိပြုပါ။
အိမ်အပြင်ဘက်တွင်ရေပုလင်းအမြဲသောက်ပါ။ သင်အိမ်နှင့်ဝေးသည့်အခါyouရိယာတစ်ခုတည်းတွင်ရှိနေပြီးရေသောက်နိုင်သည့်တိုင်ရေပုလင်းကိုအမြဲသောက်ပါ။ ရေထဲမှာမာကျော၏ရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှု၎င်းသည်စားသုံးရန်သင့်တော်သော်လည်းသင့်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေပြီးအစာခြေခြင်းပြproblemနာဖြစ်စေနိုင်သည်။
undercooked အစားအစာနှင့်အတူအလွန်သတိထားပါ။ ဆူရှီ၊ ရေငန်ငါးများ၊ ဆားငန်သောဝက်အူချောင်းများ၊ undercooked အသားများနှင့်အခြား uncooked အစားအစာများသည်နွေရာသီတွင်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။ နေရာကစိတ်မချရဘူးဆိုရင်၊ အမြဲတမ်းကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ထားသောအစာကိုစားရန်ကြိုးစားပါ.
သငျသညျကမ်းခြေမှအစားအစာကိုဆောင်ခဲ့လျှင်။ သို့မဟုတ်သင်ပျော်ပွဲစားသုံးပြီးပြင်ဆင်ထားသောအစားအစာများကိုယူဆောင်လာပါက၎င်းကိုအမြဲတမ်းအလွယ်တကူထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်းသေချာစေပါ။ ထို့အပြင်သင်အအေးခံနိုင်သည့်အေးခဲကိုယူဆောင်လာသင့်သည် အစားအစာစုံလင်သောအခြေအနေ၌ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်.
အိမ်မှာ။ သူသည်အအေးကွင်းဆက်ကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်သည်။ သူသည် ၀ ယ်ယူသောအခါအိမ်သို့ပြန်လာပြီးအစားအစာကိုလျင်မြန်စွာအေးစေသည်။ ဖြစ်သင့်သည်လတ်ဆတ်သောအရာမှချက်ပြုတ်အစားအစာများကိုစုဆောင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ အမြဲတမ်းလေလုံကွန်တိန်နာကိုသုံးပါနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အချိန်ကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်ပါ။
ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုစီတွင်သင်အသုံးပြုသောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အလွန်အမင်းသန့်ရှင်းမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်အစားအစာကိုမျှမကိုင်တွယ်မီသင်၏လက်များကိုကောင်းစွာဆေးကြောပါသစ်သီးဝလံတစ်မျိုးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စသည့်သဘာဝအရာတစ်ခုခုကိုသင်ယူတော့မည်ဆိုပါက၎င်းကိုကောင်းစွာသန့်ရှင်းစွာထားရန်လိုသည်။ ချက်ပြုတ်သည့်အခါဓားများ၊ ဖြတ်တောက်ထားသောဘုတ်၊ သစ်သားဂေါ်ပြားများသို့မဟုတ်အိုးများနှင့်အလွန်အမင်းသန့်ရှင်းမှု။
အသားသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဖြတ်ရန်ဓားတူကိုမသုံးပါနှင့် မွှေ။ ကြော်သောအရာတို့ကိုမပြုလုပ်မီကောင်းစွာပွတ်တိုက်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယားများကိုအစာကုန်ကြမ်းမှအစားအစာများမှလတ်ဆတ်သောအရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှသင်တားဆီးလိမ့်မည်။ ဤဘက်တီးရီးယားများသည်အပူချိန်မြင့်မားစွာသေဆုံးသည်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အသားသို့မဟုတ်ငါးများကိုချက်ပြုတ်သောအခါသင်ကူးစက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ မီးဖိုချောင်တွင်အနည်းငယ်ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့်သင်သည်နွေရာသီတွင်သာမကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအစာကြေခြင်းပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
နွေရာသီတွင်ဖြစ်ပေါ်သောချွေးများပိုလျှံစေရန်ကောင်းစွာရေဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်သေချာစေသင့်သည်။ သင်အားကစားပြုလုပ်ပါကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှဆားများနှင့်အာဟာရများဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်ဓာတ်သတ္တုများဖြင့်သောက်သုံးသင့်သည်။ သငျသညျကမ်းခြေသို့မဟုတ်ရေကန်သို့သွားလျှင်, အစာစားပြီးနောက်ရေထဲသို့ရုတ်တရက်မရောက်အောင်ရှောင်ပါ။ အစာခြေဖြတ်ခြင်းနှင့်အခြားပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်းထိန်းညှိသင့်သည်။
နွေရာသီတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့ရန်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအပြင်၌အချိန်ဖြုန်းရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုလျစ်လျူရှုသင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သငျသညျလုံးဝကျန်းမာလမ်းအတွက်ပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးနွေရာသီမှာအစာခြေခြင်းပြproblemsနာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » နွေရာသီတွင်အစာခြေခြင်းပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်သိကောင်းစရာများ